Izixhobo ze-IMac Pro eziNgwevu eziGreyini zithengiswa ngelixa iiSitokhwe zihlala zikho | Ndisuka mac
Yayingumbandela wexesha ngaphambi kokuba iApple ithathe isigqibo sokususa izixhobo ezingwevu ezihamba kunye nokukhumbula iMac Pro kuluhlu lwayo lokuthengisa. Inkampani igqibe kwelokuba lixesha lokuba iMac engwevu inyamalale kwintengiso yenze indlela yeemodeli ezintsha. Ngoku izinto zakho inokuthengwa ngokwahlukeneyo nanjalo iintsuku zabo zibaliwe.
Ukuba uyayithanda indawo engwevu ngombala kufuneka uthathe ithuba, kuba iApple igqibe kwelokuba lixesha lezixhobo ezikuloo mbala kwaye ezihamba ne-iMac Pro, zehlelwa yinto efanayo nekhompyuter. Ngale ndlela unokufumana enye ezi zinto zincedisayo ngelixa isitokhwe sisekhona. Njengoko sibona kwi imouse, ikhibhodi okanye iphepha lokuthengisa umkhondo Kule mibala, siyalumkiswa ukuba ngalo mzuzu sineeyunithi ezithengiswayo, kodwa xa isitokhwe siphela, singazithenga kuphela ngabantu besithathu okanye abasele benesandla.
Linyathelo eliyimfuneko, ukulandela ukurhoxiswa kwekhompyuter yakho yeMac Pro .. Xa le mibala ithengisiwe, iya kufumaneka kuphela kukhetho lwesilivere.
I-Apple injalo igumbi lokushiya iimodeli ezintsha Kufuneka beze endaweni yeemodeli ezindala. IMac Pro yayilelinye lamaxhoba okuqala kwaye ngoku izincedisi zombala ofanayo zinengxaki efanayo. Kuya kufuneka sinike indlela kwikamva, kwi-iMac entsha ene-M1 esele sinayo imodeli kwintengiso nakwimibala eyahlukeneyo kunye nezixhobo zokutshatisa. Isimbo se-Apple kakhulu, sinayo yonke into yokudibanisa kunye nemibala efanayo. Into eya kuthi ngokuqinisekileyo ibe ngumbono olungileyo kwi-iMac Pro yexesha elizayo.
Okwangoku ukuba ufuna okanye uthanda izincedisi ezikulo mbala ungwevu ungathandabuzi kwaye uzifumane ngoku, phambi kokuba ziphelelwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Izixhobo ze-IMac Pro eziNgwevu eziGreyini ziyathengiswa ngelixa izinto zihlala zikhona
I-AirTag ibeka ibhayisikile kwindawo ephangiweyo